कोरोना भाइरसको नयाँ ‘डेल्टाक्रोन’ भेरियन्ट पनि भेटियो, कति छ खतरनाक ? — onlinedabali.com
कोरोना भाइरसको नयाँ ‘डेल्टाक्रोन’ भेरियन्ट पनि भेटियो, कति छ खतरनाक ?
डबली संवाददाता२०७८ पुस २५ गते
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट विश्वा प्रभावित भइरहेको बेला अर्को नयाँ भेरियन्ट पनि पत्ता लागेको छ । साइप्रसका एक वैज्ञानिकले डेल्टा र ओमिक्रोनको संयोजनबाट नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाएका छन् ।
युनिभर्सिटी अफ साइप्रसमा जीव विज्ञानका प्राध्यापक लियोन्डिअस कोस्ट्रिकिसले डेल्टा र ओमिक्रोनको संयोजनबाट बनेको वर्णशंकर (हाइब्रिड) भेरियन्ट पत्ता लगाएका हुन् । ब्लूमबर्ग न्युनका अनुुसार कोस्ट्रिकिसले नयाँ भेरियन्टको नाम ‘डेल्टाक्रोन’ राखेका छन् ।
डेल्टा भेरियन्टभित्र ओमिक्रोनको जीन अस्तित्वमा रहेका कारण उक्त नाम राखिएको समाचारमा उल्लेख छ । हालसम्म डेल्टाक्रोनका २५ जना संक्रमित फेला परेका छन् । तर यो भेरियन्टले थप मानिसलाई संक्रमित गरे वा नगरेको र यसको असरबारे बताउन हतार हुने कोस्ट्रिकिसले प्रस्ट पारे । ओमिक्रोनले नै डेल्टाक्रोनलाई पछि पार्न सक्ने संभावना रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
यसैबीच नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११६७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा १२ हजार ६३२ नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।